ukusebenza njani dehumidifiers?
Dehumidifiers luthathe komisa emoyeni, uyibeke ibe oguquguqula epholileyo nobushushu nga leyo kuqala ukuguqula zezulu ukuba umphunga ngokutshisa. Kwaye ngoko wenze ejiya umphunga kwi ityhubhu Ukujiya. Ekugqibeleni, amanzi condensate thatha yi ye bile ekufunxeni.
dehumidifier yam ayisebenzi, ndingenza ntoni?
1). Qwalasela uluhlu lobushushu uqinisekise i plug sele ifakiwe ngokufanelekileyo.
2) lanamhlanje www.alorairsolutions.com kwaye ngenisa inkqubo FAQ Ubhaliso Free ukubhalisa imibuzo yakho. isebe inkonzo yethu iza kuqhagamshelana nawe uze unike isisombululo ngoko nangoko.
3). Unako kwakhona uthumele i-imeyile ku kwiSebe Lenkonzo AlorAir yi kwidilesi sales@alorair.com xa ufuna ulwazi olungaphezulu. Okanye ungaqhagamshelana nomphathi wendlela okanye Service AlorAir kule 888-990-7469 ukufumana ingcaciso engaphezulu
Ndimele ndenze ntoni na ingxolo omkhulu xa imisebenzi unit?
Okokuqala, qiniseka ukuba yunithi ukusebenza phantsi tyaba yaye liqinile. Okwesibini, khangela umnatha icebo lokucoca ukuqinisekisa ukuba akukho ngqi. Ukuba umnatha lokucoca ngqi, nceda uthathe phandle nokuhlambulukileyo.
Obuyenza ndakufika ndicela ezinye uhlobo khowudi readout kwiqela yam control. Ndingayifumana phi uluhlu lwe khowudi impazamo?
Iikhowudi zolahlekiso kwafunyanwa ukusuka manual abanini '(Ikwafumaneka www.alorairsolutions.com phantsi oovimba Product, Incwadi yezikhokelo). Kuba kwezinye amathandabuzo, nceda sinike ucingo 888-990-7469.
Yintoni ubomi inkonzo AlorAir dehumidifier?
ubomi inkonzo Le yunithi kaThixo kuba yiminyaka-8 okanye ngaphezulu kwezinye iimeko ezininzi.
izitifiketi Yintoni ukhuseleko (CE, ETL, CSA, njl) ntoni iimveliso AlorAir athwale?
Ezinye imifanekiso zethu athwale ETL, CE nesiqinisekiso Energy Star.
Ndingazifumana phi lesandla izixhobo yam AlorAir?
Ungayifumana incwadana okushicilelekayo kwi website yethu. Ukuba awukwazi ukulanda, qhagamshelana AlorAir kwiSebe Lenkonzo 888-990-7469. Sinako ngefeksi okanye nge-imeyili na indawo ngaphandle kwentlawulo.
Ingaba kukho naziphi na iingongoma ezibalulekileyo zokugcina dehumidifier ebusika?
Phambi ukugcina dehumidifiers ebusika, qinisekisa onke amanzi likhanyelwe ukusuka unit. Ngaphezu koko, qiniseka ukuba amanzi idreyini ityhubhu iye likhanyelwe ukuthintela ng. Iiyunithi Akukho weatherized, ngoko ke asikwazi zibekwe ngaphandle.
Ndingayifumana phi ukufumana imveliso yam AlorAir iinkonzo?
Amaninzi unit yakho iinkonzo yi technician HVAC eqinisekisiweyo; Kwakhona unako ukuyizisa i-unit emva kuthi inkonzo. Nceda utsalele umnxeba ku- 888-990-7469 ukuba akwazi ukuqalisa ngayo inkqubo.
Yintoni abanakuzibuyisela AlorAir kaThixo?
Nceda ujonge ukuba abanakuzibuyisela AlorAir apha website www.alorairsolutions.com.
Ndifanele athumela njani izixhobo yam?
Sincoma lokuthumela le unit FedEx Express Wekhusi.